San Htun's Diary: August 2011
အရင်တုန်းက စန်းထွန်းတယောက် စိတ်ကောက်ရင်ဖြင့် မျက်နှာက ရှစ်ခေါက်ချိုး၊ စိတ်ထဲ မတွေ့ ရင်ဖြင့် မျက်နှာမှာ ပေါ်တာ တန်းခနဲပဲ။ တကယ့်ကို ဟန်ဆောင်မှု ကင်းခဲ့တာပါ။
နေထိုင်မှုစရိတ် ကြီးမြင့်လှတဲ့ စလုံးမှာ အတူနေထိုင်ကြသူချင်း စရိုက်လေးတွေ မတူညီတဲ့အခါ၊ သူတပါးအတွက် စဉ်းစားမပေးတဲ့သူတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါ အစာမကြေတာတွေကို အတင်းကြိတ်မှိတ်ဝါးပြီး မျိုချရတာပေါ့။ မမျိုချနိုင်ရင်တော့ဖြင့် အိမ်အသစ်ရှာပေါ့။
အလုပ်ထဲမှာ စီနီယာ အနိုင်ကျင့်ရင်၊ အတူအလုပ်လုပ်သူချင်း ပညာပြရင် ဘာမှမဖြစ်သရောင် မျက်နှာကို ပြုံးဖြီးဖြီး(အတင်း ပါးစပ်ကို ဖြဲထားရတာ..)လုပ်ပြီး မခံချင်စိတ်တွေကို မျိုချခဲ့ရတာပေါ့။ မမျိုချနိုင်ရင်တော့ဖြင့် အလုပ်ပြောင်းပေါ့။
စွာတတ်၊ နှက်တတ်၊ မျက်နှာဖြီးထားတတ်၊ ရင်ထဲရှိတာတွေ မျိုသိပ်တတ်အောင်၊ အစာမကြေတာတွေ မျိုချတတ်အောင် စလုံးက သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ခု Principals of Success(FOREST Academy) two weeks course ကို တက်နေရပါတယ်။ FOR-REST ဆိုတဲ့အတိုင်း တကယ့်ကို REST ရတာပါ။ အတန်းစလို့၁၅မိနစ်လောက်ဆို မျက်လုံးကစင်းပြီး ခေါင်းစိုက်နေပြီ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလေးလံဆုံးက မျက်ခွံဆိုတာ အဟုတ်..တကယ်..။ သင်တဲ့ဆရာကလည်း နားမလည်တဲ့ စီးပွားရေးအကြာင်းတွေကို ဥပမာပေးပြီး ရှင်းပြတော့ ပိုပြီး ချော့သိပ်နေသလို။ Transcendental Meditation ဆိုတဲ့ တရားထိုင်နည်း ဘယ်လိုကောင်းကြောင်း၊ ဘယ်သုတေသနက ဘယ်လို ထောက်ခံကြောင်း၊ နာမည်ကြီး ဘယ်သူတွေက TM ကို လေ့လာနေတယ်ဆိုတာကို မားကတ်တင်းဆင်းသလို ဆင်းတဲ့အခါ၊ TM စတင်တည်ထောင်သူ မဟာရီချီယောကီ တရားတိတ်ခွေကို ဖွင့်ပြတဲ့အခါ ကျောင်းသားအားလုံးက အိပ်ငိုက်တော့တာပဲ။ မြန်မာလိုတရားဟောရင်တောင် ပါဋ္ဌိတွေပါရင် နားမလည်တာ ခုလို unawareness၊ consciousness၊ unboundedness၊ unifined field ဆိုပြီး အင်္ဂလိပ်တရား နာရတော့ စန်းထွန်းတယောက် ရွာလည်တော့တာပေါ့ (ကျောင်းသားအများစု)။ TMက တကယ်လည်း ကောင်းမှာပါ။ တချိန်ချိန်မှာတော့ TM ကောင်းတယ်လို့တွေးချင်တွေးလာမှာပါ။ ခုချိန်မှာတော့....
ကျောင်းက ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်တွေကတော့ တကယ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုလို SCI၊ Forest course တွေကတော့ ...း)။ ခက်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကို သင်ယူပြီး ခုလို အနားရတဲ့ ဘာသာတွေကို သင်ရတော့ အတော့်ကိုပျင်းသား။ ဆရာတွေက လိုအပ်တယ်၊အရမ်းကောင်းတယ်လို့တွေးပေမဲ့ ကျောင်းသားတွေက မတွေးတဲ့အခါ...မိဘက အာဟာရရှိစေဖို့အတင်းကျွှေးလို့အော်ဟစ်ငိုယိုပြီး မကြိုက်တဲ့ အစားအစာကို အတင်းမျိုချ စားရတဲ့ ကလေးလို...ဗြဲ...ဗြဲ။
ခုလို အားရားလိုက်၊ ယားလို့မကုတ်အားနိုင်အောင် ဘီးစီးလိုက်နဲ့စန်းထွန်းတယောက် အစာမကြေတာတွေကို ကြိတ်မှိတ်မျိုချပြီး ဝါးနေကြောင်း...။
သြဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၁၁။
အမှတ်နည်းနည်းများရင်ဖြင့် မောင်မောင်တယောက်ကတော့ "အ..မေကြီးရေ၊ အ...ဖေကြီးရေ သား အမှတ်၉၀ ရတယ်..."ဆိုပြီး တရက်ကွက်လုံးကြားအောင် လမ်းထိပ်ကနေ ဟစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အမှတ်နည်းလို့ ကတော့ အသံမထွက် ငြိမ်ကုတ်နေတာများ။ ရီပို့ ကတ်လာတော့မှ သိရတာ။ တခါတလေများ ရီပို့ ကတ်တောင် ဖြောင်လိုက်သေး။ အခုလည်း မောင်မောင့်အမ ပီသစွာ လမ်းထိပ်ကနေ ခုနစ်သံချီ ဟစ်ချင်ပေမဲ့ ဟစ်လို့ မရတော့ ဘလော့ကနေပဲ အသံပြဲကြီးနဲ့ဟစ်လိုက်ပါမယ်...(သတိ - နား ဂွမ်းဆို့ ထားတော်မူပါ...)။
"A ရတယ်ဗျို့ .................း)းDးP "
(ကြုံတုန်း ကြွားလိုက်ဦးမှ ....)
မူလတန်းတုန်းက စာမလုပ်တာများ ဘယ်လောက်တောင်လဲဆိုရင် "သူများ သားသမီးတွေ သတင်းစာ ဖတ်တတ်နေပြီ မေ့ သမီး ခုထိ မဖတ်တတ်သေးဘူး..." ဆိုပြီး မကြီးက မေ့ကို တိုင်ရတဲ့အထိ။ ဟိုင်းကြီးရွာသစ်ကျောင်း လေးတန်းရောက်တော့ ပထမ စရတယ်။ ခုနစ်ယောက်ပဲရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေကြားမှာ အနူတော လူချောလုပ်နေတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ပုသိမ်မရောက်ခင် ခုနစ်တန်းအထိ ဟိုင်းကြီးကျောင်း၊ စံပြကျောင်းတွေမှာ စန်းထွန်းတို့လူချောလုပ်ခဲ့တာပေါ့။ ကျက်စာတွေဆို စာတော်တဲ့ ကျောင်းသားတွေဆီမှာ စာတိုင်ရပါတယ်။ ကျောင်းဥယျာဉ် မြေဆွတုန်းက တီကောင်နဲ့လိုက်တို့ ထားတဲ့ ကောင်တွေ၊ ကွန်ပါဘူး ဖွက်တတ်တဲ့ ကောင်တွေ၊ ဆံပင်လိမ်ဆွဲတဲ့ ကောင်တွေတော့ စာတိုင်ချိန်ဆို စန်းထွန်း ပညာပေးတာ ကောင်းကောင်းခံရတာပေါ့။ ၏ နဲ့သည်နဲ့တောင် မလွဲရ။ လွဲလို့ ကတော့ ဒီကောင် စာမရဘူး ချာမဆိုပြီး နားရွက်ဆွဲ ခေါင်းခေါက်လုပ်တော့တာပဲ။ ဟိုကောင်တွေ ခမျာမှာလည်း သိရက်နဲ့ခံရတော့ အံတကြိတ်ကြိတ်နဲ့ ပေါ့။ အလှည့်ကျရင် မနွဲ့ မတမ်း...။
ရှစ်တန်း ပုသိမ်ကျောင်းရောက်တော့လည်း နှစ်ကျတွေ နေတဲ့ နောက်ဆုံးခန်း အီးခန်း။ အနူချော လူချော စန်းထွန်းတယာက် အခန်းထဲမှာ အဆင့်တစ်၊ တကျောင်းလုံး အဆင့်ခြောက်နဲ့ကိုးတန်း အေခန်း ရောက်လာပါတယ်။ ကိုးတန်းမှာ တနယ်လုံးက အတော်တွေ အေခန်းရောက်လာတော့ စန်းထွန်းတယောက် အရင်လို အဆင့်တစ် မရတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ထက် တော်သူတွေ ပေါ်လာပြီကိုး။ ရာထူးရှောပြီး အမြဲ အဆင့် ၂၀ ကနေ ၃၀ ကြား ရတော့တာပေါ့။
ပုသိမ်ကျောင်းကတော့ ဆယ်တန်းဆိုရင်လည်း ကျူရှင်မလိုပါဘူး။ ဆရာမတွေက အချိန်ပိုတွေ ခေါ်ပြီး တကယ်သင်ကြတာ။ တခါတလေများ ဆရာမတွေ အချင်းချင်း ဖိုက်ကြတာ သူသင်မယ် ငါသင်မယ်နဲ့ ။
ရန်ကုန်မှာတော့ ကျူရှင်က အဓိကပါပဲ။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ဖြေပြီးတော့ ဒီနှစ်လုံးလို့အိမ်ကို ပြောလိုက်တယ်။ အောင်စာရင်းထွက်လာတော့ ဒီသုံးလုံး ဖြစ်နေတယ်။ ထွက်ဖို့ ခက်တဲ့ မြန်မာစာ ဒီထွက်တာ။ ဂတ်တဲကွင်း(ရန်ကင်း)က ဆရာဦးသန်းညွန့်အသင်ကောင်းလို့ ပါ။ စန်းထွန်းတို့ နှစ်က ဘာသာစုံစနစ် ငါးဘာသာ။ မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ သိပ္ပံ(ရူပ၊ ဇီဝ၊ ဓာတု)၊ လူမူရေး(သမိုင်း၊ ဘောဂ၊ ပထဝီ)။ YIT ဆိုတာလည်း GTC ကနေ ကူးရတာ။ အိကေလို ၂မှတ်နဲ့ဆေးပြုတ်တာ မဟုတ်ဘဲ ၂၀ကျာ်နဲ့ဆေး ကပ်ပြုတ်တဲ့ စန်းထွန်း ကွန်ပျုတာကို ရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီနှစ်က ဆေးပြုတ်တော်တော်များများ ကွန်ပျူတာ ရောက်လာတယ်။
တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ကတော့ KMDမှာ IDCSတက်တာနဲ့တိုက်နေလို့ကျောင်းလုံးဝမတက်တာပါ။ စာမေးပွဲမဖြေမှီ ၂ပတ်အလိုမှ သန္တာ့ အကူအညီနဲ့ဖြေတာ အားလုံး Cရတယ်း) ။ မော်ဒရေးရှင်းနဲ့အောင်တာ။ စာမေးပွဲနီးလို့စာကြည့်ဖို့ ကို နေ့ ရွေ့ ညရွေ့ ။ တခါတလေများ စာမေးပွဲရက်တွင်း ကိုရီးယားကား အကြည့်မပျက်လို့အိမ်ကတောင် သြချရတယ်။ ဘကြီး၊ မြတ်မွန်၊ အိကေနဲ့အေးသက်လှိုင်က စာရှင်းပြမယ်ဆိုရင်တောင် ပတ်ပြေးနေတား)။ အေရရင် ကြည့်လိုက် ကွန်ပျူတာ ဘာသာရပ်နဲ့လားလားမှမသက်ဆိုင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ။ စာမေးပွဲမှာ တက္ကသိုလ်တွေကို မြို့ထဲမှာ ထားသင့်၊ မြို့ပြင်ရွေ့ သင့်ဆိုတဲ့ အက်ဆေးရေးခိုင်းတယ်။ စာမျက်နှာ လေးမျက်နှာလောက် ရွှီးလိုက်တာ အေရသွားတယ်း)။
တတိယနှစ် အမှတ်စာရင်းကတော့ ထူးဆန်းတယ် ဘာသာစုံ ၆၀(B) ရတယ်။ ကိုယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော် အားလုံး။ ဂုဏ်ထူးတန်းမှာ မာစတာဝင်ချင်ဇောနဲ့ကြိုးစားတော့ အမှတ်နည်းနည်းကောင်းတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အင်္ဂလိပ်စာနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ Software Engineering၊ Project Management၊ Artificial Intelligence တွေမှာ အေရတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ ဘီ...။
NUS မှာတော့ Analysis & Design ဘာသာ ၃.၅(B-)က အမြင့်ဆုံးရဖူးတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက ၄၊၅ ရတဲ့အချိန်မှာ(၅ က အမြင့်ဆုံး)။ ကျန်တဲ့ဘာသာတွေက ၂(C)...း) ။ ၂.၂၅ ရမှ အောင်တာပါ။ ပရောဂျက်တွေ ကယ်လို့နောက်ဆုံးမှာ ၂.၅ နဲ့အောင်သွားလေရဲ့။ အင်တန်းပရောဂျက်က Accecture Prize ဇကာတင် စာရင်းထဲပါလို့အံ့တွေ သြလို့ ။ အဆံချောင်တွေသာ အဆက်ချာ စာရင်းထဲ ပါသတဲ့။ မနာလိုတိုရှည်... သူများကို ဒါ သက်သက်...။
အခု နှစ်ခါပြန်တက်ရတဲ့၊ စတိတ်မှာ မအောင်မြင်နိုင်ဘူး၊ ဒီကျောင်းနဲ့မသင့်တော်ဘူး၊ ကျောင်းပြောင်းလို့အကြံပြုတဲ့ ပရော်ဖက်ဆာ ဂျိုးဇက်လာမန်ရဲ့ဘာသာမှာ အေရပါတယ်။ အေက အမြင့်ဆုံး A A- B+ B B- C+ C C- ထဲမှာ။ "San, good job." ဆိုပြီး ပရော်ဖက်ဆာက အသိအမှတ်ပြုလာတော့ စန်းထွန်းတယောက် မနောခွေ့ နေတာများ။
ဗီယက်နမ်မလေးမိုင်းတယောက် ၃ခေါက်တိတိ ဖြေပြီးတော့မှ ကားမောင်းလိုင်စင်ရတဲ့အခါ ပျော်လွန်းလို့ဘရိတ် ဒန့် ပါသတဲ့။ ဘိုးလင်းကစားတုန်းက အားလုံးလဲသွားရင်လည်း ထထခုန်တတ်ပါတယ်။ ခုလည်း စန်းထွန်းတယောက် ဘရိတ်ပဲ ဒန့် ချင်သလို၊ ထပဲ ခုန်ချင်သလို၊ ရက်စ်လို့အော်ပြီး လက်သီးပင့်လိုက်ချင်သလို၊ လမ်းလျှောက်ရင် မြေကြီးနဲ့မထိ၊ ပါးစပ်က နားရွက်ချိတ်လုမတတ် သွား၃၂ချောင်း အကုန်ဖေါ်ပြီး ပြုံးဖြီးဖြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ နာ..ကွ...။ အဲလို ကြုံးဝါးတိုင်း နွယ်ဝင်က မေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်နားက ကွနေတာလဲ...ဟင်..တဲ့။
ဒီဘာသာက အလွယ်ဆုံး။ နောင်ဆိုရင် ပရောဂျက်တွေလုပ်ရင်း ညလုံးပေါက် မိုးလင်းမဲ့ ညတွေ၊ အရမ်းကို ဘီးစီး(busy)၊ အစားအသောက်က မကောင်း၊ ပင်ပန်းလွန်းလို့လူရုပ်မပေါက်ဖြစ်မှာလို့ဆူနမ်၊ ရာမား၊ မိုင်းတို့ က အားပေးလာပါတယ်။ နောင် ကွချင်မှ ကွနိုင်တော့ပေမဲ့ အခုချိန်မှာတော့ စန်းထွန်းတယောက် ကွနေပါကြောင်း.... ။
နာ ..ကွ...း)းDးP
သြဂုတ် ၁၉၊ ၂၀၁၁။
နွေဦးကာလ၏ တခုသော ညသန်းခေါင်ယံကျော်ချိန်တွင် ကုတင်ပေါ်က ပြုတ်ကျလျှင်တောင် မနိုးတတ်သော စန်းထွန်းတယောက် နိုးလာပါသည်။ နိုးရခြင်း အကြောင်းက ခန္ဓာကိုယ်က ယားလာလို့ ။ ကုတ်လိုက်လျှင် သက်သာသလို ရှိပေမဲ့ ကုတ်ပြီးရင်း ကုတ်ချင်။ ကုတ်၍ပင် မဆုံးနိုင်တော့။ ဟိုကုတ်လိုက် ဒီကုတ်လိုက်နှင့် ကုတ်လိုက်သည်မှာ မိုးသာလင်းသွားရော တမှေးမှ မမှေးလိုက်ရ။ မနက်မိုးလင်းတော့ တကိုယ်လုံး ကုတ်ထားတဲ့ ဒဏ်ရာအစင်းတွေနဲ့ ။
ဆူနမ်နဲ့ရာမားကို ကုတ်ထားတဲ့ ဒဏ်ရာတွေ ပြတော့ အလာဂျီဆိုပြီး နီပေါလိမ်းဆေးပေးပေမဲ့ မသိတဲ့ဆေးကို မလိမ်းချင်။ အလာဂျီအတွက်ဆေးလည်း ပါမလာ။ သူများတွေ ပင်လယ်စာနဲ့မတည့်လို့အလာဂျီဖြစ်ကြတယ်လို့ကြားဖူးပေမဲ့ စန်းထွန်းအတွက်တော့ ခုမှ အလာဂျီဆိုတာ ကြုံဖူးတာပါ။ စာသင်နေရင်နဲ့ လည်း အနွေးထည်ဝတ်ထားလို့လွတ်နေတဲ့ နားရွက်တို့ ၊ လက်တို့ ကို ကုတ်နေသေးတယ်။ စန်းထွန်းတယောက် အားရပါးရ ကုတ်နေတာကို မြင်တော့ ဆူနမ်က သူလည်း ကုတ်ချင်လာလို့ တဲ့း) ။
ကျောင်းက သူနာပြုကို သွားပြတော့ ဆေးရုံကို ခေါ်သွားပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဆပ်ပြာအသစ်၊ လိုးရှင်းအသစ်၊ ဆေးအသစ်၊ အစားအစာအသစ် စားမိလားတဲ့။ ဘာမှ အသစ်မရှိတာပါ။ ဘာကြောင့် အလာဂျီဖြစ်တာလဲ မသိနိုင်ပေမဲ့ ပန်းဝတ်မှုန်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဆေးက ပြင်းလို့အစားစားပြီးမှ စားဖို့ထိရောက်အောင် အချိန်မှန် ဆေးသောက်ဖို့မှာပါတယ်။
ညနေစောင်းချိန်မှာတော့ နှုတ်ခမ်းတွေ ကြီးလာသလို ခံစားရပြီး အနီရောင် အကွက်တွေ ပေါ်လာပါတယ်။ တကိုယ်လုံးလည်း ထုံနေသလို ခံစားရပါတယ်။ ဆေးသောက်ပြီး ည ၇ နာရီ ကတည်းက အိပ်လိုက်တာ မနက် ၇ နာရီမှ နိုးပါတယ်။ နှိုးလာတော့ သက်သာသွားပါပြီ။ မေ၊ မကြီးတို့ နဲ့စကားပြောရင်း ဟိုကုတ် ဒီကုတ်နဲ့မနားမနေ မနေမနား ကုတ်နေတဲ့ စန်းထွန်းကို မြင်တော့ မေက စိတ်မကောင်းဖြစ်လွန်းလို့ တဲ့ ငိုပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ ဘာသာရပ်မှာလည်း တခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွေကို ဘာသာခွဲတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ Networking လို့ ခေါ်တဲ့ အင်တာနက်၊ ကွန်ပျူတာတွေ အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်တာကို အထူးပြုတဲ့ ဘာသာ။ website ကို လာတိုက်ခိုက်ရင် ဘယ်လိုတုံ့ ပြန်မလဲ၊ ကိုယ့် website ကို လူတွေ ဘယ်လောက် သုံးနိုင်မလဲ၊ တလောကတောင် နိုင်ငံခြားအသံလွှင့်ဋ္ဌာနတွေရဲ့website တွေကို လူအများကြီး လာကြည့်ပြီး website ဒေါင်းသွားအောင်လုပ်တဲ့ DDoSနည်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာ ခံရပါတယ်။ DDoS(Distributed Denial of Services attack) လို့ခေါ်တဲ့ တပြိုင်နက်တည်းမှာ ဆာဗာပေါင်းများစွာကနေ websiteတွကို request ပေါင်းများစွာ ပို့လိုက်တဲ့အတွက် siteရဲ့ဆာဗာတွေက ပြန်လည်တုန့်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ဒေါင်းသွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
internship ဆင်းတုန်းက SBS Transit website ကို ကားနံပါတ်၊ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်နံပါတ်တွေကို အကြိမ်တထောင်လောက် ပို့ ပြီး စမ်းလိုက်တာ နောက်နေ့SBS Transit website ကို ဖွင့်လို့မရတော့ပါဘူး။ သူ့website ကို ဒေါင်းအောင် လုပ်နေတယ် ထင်ပြီး ဒီ IP address ကို ဘမ်းလိုက်ပြီလေ။ ရုံးကနေ SBS Transit website ဖွင့်လိုက်ရင် မြန်မာပြည်မှာလို Access Denied ဆိုတဲ့ စာတမ်းကြီး ပေါ်လာတယ်း) ။ မရည်ရွယ်ဘဲ DDoS ဖြစ်သွားတာ။ supervisor သိတော့ ဆူလိုက်တာလေ။ သူက stimulate(အတုအယောင်)လုပ်ပြီး စမ်းခိုင်းတာ။ သိဘူးလေ တို့ တွေက တကယ်ကြီး သွားစမ်းတား)။
Database လို့ ခေါ်တဲ့ အချက်အလက် data တွေကို database ထဲမှာ ဘယ်လို သိမ်းဆည်းမှာလဲကို အထူးပြုတဲ့ ဘာသာ။ ပစ္စည်းတွေကို စနစ်တကျ၊ အစီအစဉ်အလိုက် သိမ်းဆည်းထားရင် နေရာပိုကျယ်၊ ရှာရတာ လွယ်သလို Database မှာလည်း စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းထားဖို့လိုပါတယ်။
Design ကတော့ website လှလှလေးတွေ တည်ဆောက်တာကို အထူးပြုတဲ့ ဘာသာရပ်။ တချို့website လေးတွေဆို အရောင်လေးတွေ၊ ဖလပ်ဖလပ် ပြေးနေတာလေးတွေနဲ့တော့်တော့်ကို လှပါတယ်။ စန်းထွန်းကတော့ ဒီဇိုင်းအမြင် ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် လူကိုပဲ ကြည့်။ အမြဲ တီရှပ်နဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီ။ စန်းထွန်း ဆောက်တဲ့ website ကလည်း တီရှပ်နဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီ ဒီဇိုင်းပဲ ပေါက်မှား) ။
Project Management ကတော့ အတွေ့ အကြုံတွေ အများကြီးရှိမှပါ။ ရတဲ့ လူ၊ အချိန် နဲ့ငွေတို့ ကို အသုံးချပြီး project အောင်အောင်မြင်မြင် စီမံခန့် ခွဲနိုင်တာလည်း ဘာသာရပ် တခုပါ။ project manager လုပ်ပြီး အောက်က လူတွေကို ခိုင်းမယ်လို့လေလုံးထွားပေမဲ့ အခုတော့ leader ခိုင်းတာကိုတောင် မပြီးလို့အသည်းအသန် လုပ်နေရတား)။
Data Security ဆိုတဲ့ ဘာသာကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဟိုးအရင်ခေတ်ကတည်း စစ်ပွဲတွေမှာ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာစတိုက်ဆိုတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို စစ်သေနာပတိက ရှေ့ တန်းကို ဆက်သားနဲ့ပို့ ရင် သတင်းဝှက်ပြီး ပို့ လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါမှ မတော်တဆများ ရန်သူက ဒီစာကို ရသွားရင်တောင် ဖော်တတ်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဥပမာ အေဆိုရင် စာမှာ ဒီ။ ဖော်မြူလာက တကယ့်စာလုံးရဲ့သုံးခုမြောက်။ ရတဲ့သူက ဒီတွေ့ ရင် ဖော်မြူလာကို သုံးပြီး ဖော်မှ လိုရင်းကို ရတာပါ။ L oryj x. ရဲ့ တကယ့်အနက်က I love u.။ ဖော်မြူလာ(တကယ့်စာလုံးရဲ့သုံးခုမြောက်)ကို သိမှ ဖော်လို့ ရတာ။
အခုခေတ်မှာ နည်းပညာတွေက တိုးတက်လာတော့ ဟတ်ပြီး ကိုယ့်ဆီက ပိုက်ဆံတွေကို ခိုးယူတာတို့ရှိလာပါပြီ။ ခေတ်သစ်ဓားပြတွေက အိမ်ကို သွားပြီး တိုက်စရာမလိုတော့ပါ။ ဒီအတွက် ဘဏ်တွေက Data တွေကို ပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိအောင် Security တွေ အထပ်ထပ် ထားတာပါ။ စင်္ကာပူမှာ online ကနေ money transfer လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် token နှိပ်ပြီး နံပါတ်တွေ တောင်းတာ Security အတွက်ပါ။
System Analysis ကတော့ userတွေရဲ့လိုချင်တာတွေကို ဘယ်လို screen designက userတွေအတွက် အဆင်ပြေမလဲလို့စဉ်းစာရတာပါ။ dropdown list နဲ့radio button ဘယ်ဟာက userကို ပို အဆင်ပြေမှာလဲ။ click နဲ့ submit ဆိုရင် userက ဘယ်ဟာကို ပိုနားလည်မလဲ။ ဒီbox ကို ဒီမှာထားတာထက် ဘယ်နားမှာ ထားရင် userကို ပိုအဆင်ပြေစေမှာလဲ။ အားလုံး user အတွက်ပဲ စဉ်းစားပြီး screen design ဆွဲရတာပါ။ အဲဒီ screen design အတိုင်းဖြစ်လာအောင် Programmer က ရေးရတာပါ။
Software Engineer ကတော့ ဆော့ဝဲတွေကို ရေးရတာပါ။ စာကြည့်တိုက်မှာ ဆိုရင် လိုချင်တဲ့ စာအုပ်တွေ ရှာတာ၊ စာအုပ် ရနိုင် မရနိုင် စစ်တာ၊ စာအုပ်တွေကို reserve လုပ်တာကို library system software သုံးပြီးလုပ်တာပါ။ ဒီလို ဆော့ဝဲမျိုး ရေးသားသူကတော့ Software Engineer၊ Programmer။ ဆော့ဝဲရေးတာကို (program) ပရိုဂရမ်ရေးတာ၊ တနည်းပြောရရင် (coding)ကုတ်တင်းရေးတယ်လို့ကွန်ပျူတာ ဝေါဟာရနဲ့ခေါ်ပါတယ်။ Software Engineer လို့ ပဲခေါ်ခေါ် Programmerလို့ ပဲခေါ်ခေါ် တူတာကတော့ ကုတ်ရတာပါ (ကုတ်တင်းရေးရခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်)။
UCSY တက်တုန်းကတော့ စာရွက်မှာပဲ ကုတ်ရတာပါ။ NUS မှာတုန်းက ကုတ်ရပေမဲ့ ကုတ်တာ အားနည်းတဲ့ စန်းထွန်းတယောက် ခက်တဲ့အပိုင်းဆို ဝေါင်ဝေါင်ရှေးလို့လွယ်တဲ့အပိုင်းကိုမှ ယူတာပါ။ error တက်ရင်လည်း အခန်းပေါက်စေ့အောင်လိုက်ပြီး error ရှင်းပေးမဲ့ ကယ်တင်ရှင်ကို ရှာတတ်ပါတယ်။ အလုပ်ထဲမှာလည်း မကုတ်တတ်ရင် leader ဆီ သွားပြီး အကြံညဏ်တွေတောင်း၊ကုတ်အဟောင်းတွေ တောင်းတတ်ပါတယ်။
ကုတ်တာ အားနည်းတဲ့ စန်းထွန်းတယောက် ဒီကျောင်းရောက်တော့ ရေရေလည်လည် ကုတ်ရတာပါ။ မကုတ်ရတဲ့နေ့ လို့မရှိပါဘူး။ နေ့ တိုင်း အားတိုင်း ကုတ်ချင်လည်း ကုတ်၊ မကုတ်ချင်လည်း ကုတ်ရတာပါ။ ဖင်ကုတ်၊ ခေါင်းကုတ်၊ မျက်မှောင်ကုတ် ပုံသဏ္ဌန်မျိုးစုံနဲ့ကုတ်နေတဲ့ စန်းထွန်းကို တွေ့ ရပါမယ်။ အိမ်လည်း မလည်နိုင်၊ အိမ်မှာလည်း မရှိတဲ့ စန်းထွန်းကို jasmine တယောက်က သတိတရနဲ့"ဘာတွေ လုပ်နေလဲ"လို့မေးလာပါတယ်။ "မကုတ်မနေ အသက်ရှည်"ဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်း စန်းထွန်းတယောက် မနားမနေ မနေမနား ကြိုးစားပန်းစား ကုတ်နေပါကြောင်းး)။ ကုတ်ချင်သူများ၊ ကုတ်တာ ဝါသနာပါသူများ၊ မကုတ်ဘဲ မနေနိုင်သူများ ဒီကို ကြွခဲ့ပါလို့ဖိတ်လိုက်ပါတယ်။ အမုန်း ကုတ်ရမှာနော်း) ။
ကဲ...ကုတ်လိုက်ကြစို့သူငယ်ချင်း အောက်အီးအီး အွတ် အဲလေ..ကွတ်(ကာရန်နဘေကိုက်အောင် ကွတ်..လိုက်ပါသည်။ ကုတ်...ဟု မှတ်ယူတော် မူကြပါကုန်။)
(မှတ်ချက်။ မောဓာဝီ ၏ အချစ်များစွာဖြင့်... ကို မှီးသည်။)
သြဂုတ် ၁၂၊ ၂၀၁၁။
The day after Singapore National Day(NDP) is Magyi's birthday !
သြဂုတ် ၉ ရက်ကတော့ မလေးရှားကနေ ခွဲထွက်ပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံ စတင်ထူထောင်တဲ့နေ့ ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့မွေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားနေ့ ကို တခမ်းတနား ဆင်နွှဲကြပါတယ်။ သြဂုတ် ၁၀ ကတော့ မကြီးရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ မကြီးမွေးနေ့ ကိုတော့ ဘလော့ကနေပဲ တခမ်းတနား ဆင်နွှဲလိုက်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်း ပထမဆုံး မှတ်မိတဲ့အချိန်မှာ မကြီးဘေးနား ရောက်နေပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ မောင်မောင်က ဖေ၊မေ ကြားထဲမှာ အခန့် သား နှပ်နေတာပေါ့။ အိပ်တာကြမ်းလို့ကုတင်ပေါ်ကနေ ပြုတ်ကြကတည်းက စန်းထွန်း နံရံနဲ့မကြီးကြား အိပ်ရတော့တာပဲ။ ဘယ်သွားသွား မကြီးနောက် လိုက်ချင်ကြတဲ့ မောင်မောင်နဲ့စန်းထွန်းကြောင့် မကြီးခမျာ အငယ်တွေတန်းလန်းနဲ့ကောင်းကောင်း မဆော့ရဘူး။ မောင်မောင့်ကို ခါးထစ်ခွင်ချီ စန်းထွန်းကို လက်တွဲရလို့ခါးမှာ ခုထိ မဲနေသေးတယ်။
ဇီးခြံသောင်ဖက် လမ်းလျှောက်သွားတဲ့ မကြီးနဲ့မမာမာမင်းကို မြင်တော့ စန်းထွန်းက အသံပြဲနဲ့ငိုယိုပြီး လိုက်ဖို့ တောင်းတာ။ ချော့လို့ မရတဲ့အဆုံး စန်းထွန်းကို ခေါ်သွား။ အလာတုန်းက ဒူးလောက်ရောက်တဲ့ ချောင်းက အပြန်မှာတော့ ကလေးအရပ်နဲ့ရင်ခေါင်းရောက်နေပြီ။ အရပ်ရှည်တဲ့ မမာမာမင်းက စန်းထွန်းကို ပုခုံးပေါ်တင်ပြီး ချောင်းကို ဖြတ်ရတာ။ မေက ရေကတက်နေပြီ၊ ကလေးတွေလည်း မတွေ့ တော့ စိတ်ပူလို့ရှာတာ တရွာလုံး နှံ့ နေပြီ။
နေမကောင်းတဲ့ မောင်မောင်က စန်းထွန်းတို့ တွေ ကောက်ညှင်းပေါင်းစားလို့စားချင်ပါသတဲ့။ မေ့ကို မပြောရင် ကျွေးမယ်ဆိုတော့ မောင်မောင်က ခေါင်းညိတ်ပါတယ်။ သူကတိတည်ပြီး မေ့ကိုမပြောပေမဲ့ အီးအီးပါတဲ့အခါ ကောက်ညှင်းမဲမဲတွေက ညာလို့ မရတော့ အတီးခံရပါရောလား။ မကြီးနဲ့ မေက ဒီလို ဆုတောင်းလေ့ရှိတယ်။ နောင်ဘဝဆက်တိုင်း အကြီးဆုံးမဖြစ်ရပါလို၏တဲ့။
ပုသိမ် အမှတ်၂ကျောင်းမှာလည်း စာတော်တဲ့ မကြီးညီမဆိုတော့ ဆရာမတွေက အားလုံးက ဂရုစိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းတက်ချင်တဲ့ မကြီးကြောင့်ပဲ စန်းထွန်းတို့ တွေ ရန်ကုန်ရောက်ရတာပါ။ ရန်ကုန်ရောက်တော့လည်း ငယ်ငယ်တုန်းကလို နံရံနဲ့မကြီးကြားမှာ အိပ်ရတာပါပဲ။ ဖေ၊မေက နယ်မှာ နေပြီး တလတခါ၊ စာမေးပွဲတွေရှိရင် ရန်ကုန်တက်လာပါတယ်။ ပိုက်ဆံကို ဖေ၊မေ ပေးပေမဲ့ မောင်နှမတွေအတွက် အစစအရာရာ မကြီးပဲ စီစဉ်ပေးတာပါ။
စန်းထွန်းဆို ငပျင်း။ မကြီးကြောင့်သာ သင်တန်းတွေ တက်ဖြစ်တာပါ။ ကိုယ့်ဘာသာဆို ဘာသင်တန်းမှ တက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်။ အဝတ်အစားဆိုလည်း သင့်လျော်ရာ မကြီးက ဝယ်လာတာပဲ။ ဘာလိုချင်လဲတာ ပြောလိုက်။ အမကြီး အမိရာ။ ဖေ၊မေတို့ က အလေးထားတဲ့၊ အမျိုးတွေအားလုံးက လေးစားရတဲ့၊ မောင်နှမတွေအားလုံးက လေးစားရတဲ့ မကြီးက ဘာမှာပြောစရာမရှိအောင် တော်ပါတယ်။
မကြီးဆို ချွေးမတော်ချင်သူတွေ အများသား။ မိဘအဝေးမှာပေမဲ့ မောင်နှမတွေကို ကောင်းကောင်းထိန်းကြောင်းနိုင်ပြီး အနေအထိုင် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်လို့ တဲ့။ စန်းထွန်းဆို အမြင်ကတ်ရင် နှပ်တတ်သေးတယ်။ မကြီးကတော့ ဘယ်သူ့ ကိုမှ မနှပ်၊ စကားကိုလည်း လေအေးအေးလေးနဲ့ညင်ညင်သာသာလေး ပြောတာပါ။ အိမ်မှာဘယ်သူ့ စကားမှ လက်မခံတဲ့ မောင်မောင်ကိုတော့ မကြီးပြောရင် ရတယ်။
စင်္ကာပူကိုလည်း မကြီးကြောင့်သာ ရောက်လာတာပါ။ ကိုယ့်ဘာသာဆို ရောက်ဖို့ဝေး။ မေက စန်းထွန်း စင်္ကာပူကို လာတော့ အတော်ဝမ်းသာတာ မကြီးအဖော်ရပြီဆိုပြီး။ တကယ်လည်း အဖော်ရရုံမကပဲ တတွဲတွဲဖြစ်လွန်းလို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တောင် သိပ်မသွားဖြစ်ပါဘူး။ shopping သွားမယ်ဆိုရင်လည်း တခြားသူမလို၊ စောင့်စရာမလို၊ ညှိစရာမလို ကောက်သွားလိုက်ရုံပဲလေ။ စန်းထွန်းမလာခင်တုန်းက ညနေစာဆို အသီးအနှံ၊ နွားနို့ သောက်ပြီး ပြီးတတ်ပေမဲ့ စန်းထွန်းရောက်လာတာနဲ့အစားကြီးတဲ့ သူ့ ညီမအတွက် ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ချက်ပြုတ်ပေးရင်း သူလည်း တီးဖြစ်ရော။
မော်ဒယ်ကိုယ်လုံးပိုင်ရှင် မကြီးက အဝတ်အစား စမတ်ကြသလို အမြဲတမ်း လှပနေတာပါ။ အိပ်နေပုံကအစ မော်ဒယ်ပုံလို့ပြောကြတယ်။ စင်ဒီကရောဖို့ နဲ့တူတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ သူငယ်ချင်း ကောင်းကောင်း၊ ကိုစိုင်း၊ အောင်ကြီးတို့ ဆို စန်းထွန်းကိုတွေ့ ရင် မကြီးနေကောင်းလား မေးရတာ အမော။ ငါ့နှယ်နော် ငါက မစွံဘဲ မကြီးကတော့ စန်းထွန်းသူငယ်ချင်းတွေကြားထဲလည်း စန်းပွင့်နေတာ။
စန်းထွန်းတို့ နှစ်ယောက်ကို ရွယ်တူလို့ထင်ကြတယ်။ ကိုယ်ကပဲ ရင့်နေတာလား သူကပဲ နုနေတာလား။ စန်းထွန်းကတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင် မင်းသားမင်းသမီး မငိုရသေးဘူး စန်းထွန်းက ငိုနေပြီ။ ထစ်ခနဲရှိ မျက်ရည်ကအရင်။ မကြီးကတော့ မျက်ရည်ကျခဲတာပါ။ မျက်ရည်ကျခဲတဲ့ မကြီး စန်းထွန်း အမေရိကားလာတော့ ငိုတယ်ဆိုတော့ သိရတော့ ကျေနပ်မိသေးတယ်း) ။
စိတ်ဓာတ်တွေ ကျတိုင်း၊ ဝမ်းနည်းအားငယ်မိတိုင်း မကြီးဆီက စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ ရတာပါ။ အဝေးကြီးမှာ ရောက်နေပေမဲ့ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့ ဖေ၊မေ၊မကြီး၊မောင်မောင်၊ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိတယ်ဆိုရုံနဲ့ တင် စိတ်ထဲပျော်ရွှင်ကျေနပ်ရပါတယ်။ မိဘအပေါ် သိတတ်လိမ္မာတဲ့၊ မောင်နှမတွေကို ချစ်ပြီး စောင့်ရှောက်တဲ့ မကြီးကို သတိရမိသလို ဘာမှ မလုပ်တတ်၊ ဟင်းညာညာချက်ခိုင်း၊ တခါတလေ စိတ်ကောက်တတ်ပြီး ရန်ထောင်၊ အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ သူ့ ညီမလေးကိုလည်း မကြီး သတိရနေမှာပါ။
ခြိုးခြံချွှေတာနေရတဲ့ ကျောင်းသူမို့ လို့မွေးနေ့ လက်ဆောင်ကို နောင်နှစ်မှပဲ ပေါင်းပေးတော့မယ်နော်း) ။ ချစ်ရပါသော မကြီးတယောက် မွေးနေ့ မှသည် ပျော်ရွှင်ကြည်နှုးစရာကောင်းသော ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေ။ ဆန္ဒတွေလည်း တလုံးတဝတည်း ပြည့်ပါစေလို့ ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ တူလေး၊ တူမလေးတွေ အမြန်ဆုံး မွေးပေးပါစေး) ။
မွေးနေ့ လက်ဆောင်။ ဈေးအကြီးဆုံးကို ပေးလိုက်စမ်းမယ်။ ဒီတခါတော့ ပိုက်ဆံကို သိပ်မစဉ်းစားတာ့ဘူး။ ကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းကို ဆွဲယူလိုက်ပြီး ပေးလိုက်တယ်းP ။
မကြီးနဲ့နှစ်ယောက်တွဲ ပုံလေးတွေကို အမှတ်တရ တင်လိုက်ပါတယ်။ သိနေတယ်နော် သိနေတယ် ပြောကြတော့မှာ မကြီးက ပိုလှတယ်လို့ ။
ဒီပုံကတော့ အမေရိကားကို လာတဲ့နေ့ က လေဆိပ်မှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံ။ နောင် ဘယ်တော့များမှ မကြီးနဲ့ ဓာတ်ပုံ အတူတူ တွဲရိုက်ခွင့် ကြုံမှာပါလိမ့်။
သြဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁။
ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာတော့ သင်တဲ့စာအုပ်တွေက တကယ်ကောင်းပါတယ်။ အထူကြီးတွေ(ခေါင်းအုံးအုံးအိပ်ဖို့အတော်ပဲး) )။ lab ခန်းထဲ တခါပဲလား ဝင်ဖူးတယ်။ ကွန်ပျူတာတွေကလည်း စုတ်နေတာ များပါတယ်။ ပရိုဂရမ်တွေကို စာရွက်မှာပဲ ရေးကြတာ။ ကျက်စာတွေဆို အလွတ် ကျက်ကြတာ။ ခလုတ်တိုက်ရင် မေ့ရော။ ကျောင်းသာ ပြီးသွားတယ် ခေါင်းထဲ ဘာမှ မကျန်ခဲ့၊ ကွန်ပျူတာတောင် ကောင်းကောင်း မရိုက်တက်၊ ပရိုဂရမ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုရေးရမှန်းမသိ။ ဘုရားစူး ကွန်ပျူတာ။ thesis ဆိုလည်း shadow နဲ့ရေးတာများပါတယ်။ တကယ်လုပ်၊ တကယ်တတ်တဲ့လူလည်း ရှိမှာပါ။ အများစုကတော့ သူလိုကိုယ်လိုပါပဲ။ UCSY မှာ ၅နှစ်လောက် တက်ခဲ့လို့ ပဲ NUS မှာ တက်ခွင့်ရတာပါ။ မဟုတ်ရင် undergraduate poly တက်နေရမှာ။
မြန်မာပြည်မှာကလည်း အလုပ်အကိုင်ရှားပါးတော့ သင်ယူထားတဲ့ ဘာသာနဲ့လုပ်ကိုင်ဖို့အတော်ခက်ပါတယ်။ chemistry၊ physis၊ maths တို့ နဲ့ဘွဲ့ ရထားသူတွေ ဘာလုပ်ရမလဲ။ ဒီလိုနဲ့ကျောင်းပြီးတော့ မိဘလုပ်ငန်းကိုပဲ ဦးစီးချင် ဦးစီး၊ ကုမ္ပဏီ အလုပ်ဝင်ချင်ဝင်၊ အစိုးရဝန်ထမ်း လုပ်ချင်လုပ်။ ကိုယ်တတ်ထားတာတဲ့ ပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်ရတာ အတော်ကံကောင်းလို့ မှတ်။ ဒါဆို မတတ်မဲ့ အတူတူ ဘာလို့ကျောင်းတက်မှာလဲလို့မေးစရာ ရှိတယ်။ ဘွဲ့ လား လိုတာပေါ့။ ဧည့်ခန်းမှာ ဓာတ်ပုံချိတ်ဖို့ ။ ဘွဲ့ လေးမှ မရရင် ဂုဏ်ငယ်တာပေါ့။ လူတိုင်းဘွဲ့ ရနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ။ အဝေးသင်တက်တဲ့သူတွေကတော့ ဘယ်လိုနေတယ်မသိ။ ကိုယ်တွေ day သမား နေ့ တိုင်း ကျောင်းတက်နေတာတောင်။
နိုင်ငံခြားက ပညာရေးကတော့ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး။ homework တွေ အများကြီး။ individual project၊ group project၊ presentation။ နားလည်အောင် စာတွေဖတ်။ အတန်းပြီးရင် လေ့ကျင့်ဖို့ကွန်ပျူတာ တယောက်တလုံး။ စာကြည့်တိုက်မှာလည်း စာအုပ်တွေက အများကြီး။ အလွတ်ကျက်လို့မရပါဘူး။ တကယ်နားလည် သဘောပေါက်မှ ဖြေလို့ ရတာပါ။ တကယ်တတ်မတတ်ဆိုတာ ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေး၊ သင်ကြားနည်း စနစ်၊ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်နှုန်း၊ ကျောင်းသားတွေရဲ့သင်ယူလေ့လာနိုင်စွမ်းတွေပေါ် မူတည်ပါတယ်။
ကျောင်းတကျောင်းရဲ့အရည်အသွေးကို နိုင်ငံခြားကျောင်းသားတွေ လာတက်နှုန်း၊ ကျောင်းပြီးရင် အလုပ်ရနှုန်း၊ သုတေသနလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်နှုန်း၊ ကျောင်းဆင်းရဲ့လက်တွေ့ ဘဝတွေမှာ အောင်မြင်မှုနှုန်း၊ သင်ယူထားတဲ့ ပညာနဲ့ အသက်မွေးနှိုင်နှုန်းတွေနဲ့တိုင်းတာပါတယ်။ ကျောင်းကောင်းမကောင်း၊ တကယ်တတ်မတတ် ဆိုတာ ပြောစရာမလိုဘဲ အချိန်တန်ရင် သိလာမှာပါ။
နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းပြီးသွားကြသူတွေ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပြီး လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ချင်ကြပေမဲ့ အလုပ်အကိုင်၊ လစာရှားပါးတော့ နိုင်ငံခြားမှာပဲ အခြေချကြတာ များပါတယ်။ ကလေးရှိသူတွေဆို ကလေးတွေ ပညာရေးအတွက် နိုင်ငံသားခံယူလိုက်ကြတာ များပါတယ်။ နိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံခြားသားက အခွင့်အရေးက အတော်ကွာတာကိုး။
မြန်မာပြည်မှာနေတုန်းကတော့ နွားခြေရာခွက်ထဲက ဖားလို အိုင်ထဲကရေကို ပင်လယ်ထင်နေတာပါ။ သူများတိုင်းပြည်တွေ တိုးတက်နေတာတွေ့ ပေမဲ့ကိုယ်နဲ့လားလားမှ မဆိုင်။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်လည်းရောက်ရော သူများတိုင်းပြည်တွေ တိုးတက်နေတာတွေ မြင်ရတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးကိုလည်း အဲလို တိုးတက်စေချင်ပါတယ်။ ခုမှ ပင်လယ်ကြီးကို တကယ်မြင်ဖူးတား) ။
အာဆီယံညီလာခံမှာ မြန်မာပြည်က ပညာရေးဝန်ကြီးက မြန်မာပြည်မှာ တက္ကသိုလ်ပေါင်း ၁၀၀ကျော်ရှိတယ်လို့ကြွားပါတယ်။ တကယ်လည်း ရှိပါတယ်။ သူမို့မရှက်။ တို့ ကတော့ သူ့ အစား ရှက်လိုက်တာ။ ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၂၀ကျော်၊ ၄၀ကျာ် ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် ၁၀၀ထဲမှာ ပါတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေ ရှိတဲ့ စင်္ကာပူက မကြွားရဘဲ ဒင်းက ကြွားနေလို့ လေ။ ပြောလိုက်ချင်တယ် အရည်အတွက်ထက် အရည်အသွေးက အဓိကပါလို့ ။
သူများနိုင်ငံတွေက ပညာရေးအတွက် ဘတ်ဂျက်တွေ အများကြီး သုံးနေချိန်မှာ တဦးအတွက် ၁၀ ဒေါ်လာလောက်ပဲ သုံးနေတော့လဲ တိုးတက်ဦးမယ်။ ပညာရေးစနစ်ကို ကိုယ်မပြောင်းနိုင်တော့လည်း ပြောင်းနိုင်တာက ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ ရှိတယ်။ အဆင်ပြေရင် နိုင်ငံခြားကျောင်းသွားတက်၊ အင်္ဂလိပ်စာကို ကောင်းအောင်လုပ်ပြီး စကော်လားရှစ်လျှောက်။ အချိန်အခါ မသင့်သေးရင်တော့ အင်္ဂလိပ်စာကို ကောင်းအောင်လုပ်ပြီး ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်တော့ တနေ့ နေ့ တော့ အခွင့်အရေးဆိုတာ ပေါ်လာမှပါ။
ရုပ်ရည်ချောမောလှပမှုတွေက အသက်ကြီးလာရင် ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သလို၊ ရည်းစားဆိုတာလည်း အဆင်မပြေတဲ့ တချိန်ချိန်မှာ ကိုယ့်ကို ထားသွားနိုင်ပါတယ်။ မပျောက်ကွယ်ဘဲ ကိုယ့်ဆီမှာ အမြဲရှိနေပြီး တန်ဖိုးရှိနေမှာက ပညာပါပဲ။
သြဂုတ် ၆၊ ၂၀၁၁။
Exam is the necessary evil.
သူငယ်တန်းကတည်းက ဖြေလာလိုက်တာ ခုထိလည်း ဖြေနေဆဲ။ နောင်လည်း ဖြေလတ္တံ့ ။
မြန်မာပြည်က စာမေးပွဲတွေကတော့ လွယ်တယ် ဆိုရမယ်။ စာမေးပွဲနီးရင် တီချယ်တွေ ရွေးပေးတာတွေ၊ စတားသုံးလုံးလောက်ပြထားတဲ့ ဟာတွေကျက်လို့ ကတော့ အောင်မှတ်ကတော့ ပြေးမလွတ်ဘူး။ အလွတ်ကျက်နိုင်ရင် အောင်ပြီ။ ဒါကိုတောင် စပေါ့ရိုက်(ရွေးကျက်သေးတာ)။
IDCS တက်တုန်းကတော့ မေးခွန်းကို အင်္ဂလန်က ထုတ်တာ။ တီချယ်တွေက ရှေ့ အပိုင်းတွေ သင်ထားတာ မေးခွန်းက နောက်ပိုင်းတွေ မေးတော့ ကျလိုက်ကြတာ သောက်သောက်လဲ။ ဒေါ်လာ ၁၀၀ကျော် ပြန်သွင်းမှ ပြန်ဖြေလို့ ရတယ်။ မအောင်ရင် certificate မပေးဘူးလေ။ အဲဒီတုန်းက ဒီလိုကြွှားတာ။ "လူကသာ အင်္ဂလန် မရောက်သေးတာ။ ငါ့အဖြေလွှာစာရွက်ကတော့ အင်္ဂလန်ကို ရောက်နှင့်နေပြီ" လို့ ။
NUS မှာတော့ စာမေးပွဲက open book ။ ကြိုက်တဲ့စာအုပ်၊ ကြိုက်သလောက်သယ် အဖြေက တခုမှ စာအုပ်ထဲမှာ မရှိဘူး။ ခေါင်းထဲမှာပဲ ရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားက မေးခွန်းထုတ်တဲ့ ACCA ၊ IDCS တို့ လည်း open book နီးနီးပဲ။ ဘာမေးမယ်မှန်း မသိဘူးလေ။ ဆရာတွေ သင်တဲ့ဟာပဲ ကြည့်လို့ ကတော့ မလုံလောက်ဘူး။ မြန်မာပြည်က closed book ကတော့ အပုဒ် ၂၀ ကျက်ရင် ၁ပုဒ်လောက်က ပြေးမလွှတ်ဘူး။
ခုလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ closed book ပေမဲ့ အဖြေက စာအုပ်ထဲမှာ မရှိဘူး။ ခေါင်းထဲမှာပဲ။ ဆရာသင်တာနဲ့ တင် မလုံလောက်ဘဲ တခြားစာအုပ်တွေ ဖတ်ထားတော့မှ တန်ရုံကြတာ။ Practice makes perfect. ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာလို ကြက်တူရွေး နှုတ်တိုက်ကျက်လို့မရပါဘူး။ တကယ် နားလည် သဘောပေါက်မှ ဖြေနိုင်တာပါ။ မြန်မာပြည်က ပညာရေးနဲ့နိုင်ငံခြားက ပညာရေး တော်တော်ကွာပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အချိန်တွေကုန်၊ ပိုက်ဆံတွေ ကုန်တာခြင်း အတူတူ နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်တာက တကယ်တတ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် နိုင်ငံခြားက ဘွဲ့ ၊ နိုင်ငံခြားကကျောင်းတက်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ UCSY မှာ ၅နှစ်တက်တာထက် NUS မှာ ၁နှစ်တက်တာက ပညာတွေ အများကြီးရပြီး ပိုတတ်ပါတယ်။
ဒီမှာတော့ exam လို့မခေါ်ပါဘူး Opportunity to Integrate and Stabilize the Knowledge တဲ့။ ကိုယ့်ရဲ့ညဏ်ပညာတွေကို ပေါင်းစပ်အသုံးချပြီး အရည်အချင်းပြနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးပါတဲ့။ တို့ တွေကတော့ အရည်အချင်းလည်း မပြချင်ပါဘူး (ပြစရာလည်း မရှိလို့ )။ ဒီလို အခွင့်အရေးမျိုးလည်း မလိုချင်ပါဘူးး)။
အရက်ကြိုက်တဲ့လူတယောက်က ပြောတယ်။ အရက်သောက်တာကို မတားမြစ်တဲ့ ဘာသာတရားရှိရင် ပြော။ အဲဒီဘာသာကို သူပြောင်းမယ်တဲ့။ ခု စန်းထွန်းလည်း စာမေးပွဲမရှိတဲ့ ကျောင်းရှိရင်ပြော။ အဲဒီကျောင်းကို ပြောင်းမယ်လို့ ။
သြဂုတ် ၄၊ ၂၀၁၁။
ခါးနာနေတဲ့ ဆူနမ်ကို မိုင်းနဲ့ရာမားက နှိပ်ပေးနေတာ မြင်တော့ အားကျမခံ စန်းထွန်းလည်း နှိပ်ပေးလိုက်တာ နာလို့ တဲ့ အော်ပါလေရော။ သူများက စေတနာနဲ့အကောင်းနှိပ်ပေးမှာကို။
အိမ်မှာ ဖေ၊ မကြီးက အညောင်းသမားတွေ။ ကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့ မေကတော့ လုံးဝမညောင်းတတ်တာပါ။ စန်းထွန်းကတော့ တခါတလေ ညောင်းရင် ဇက်ချိုး၊ ပရုတ်ဆီလိမ်းလိုက်ရင် သက်သာသွားတာပဲ။ အိမ်မှာ ညတိုင်း ဖေ့ကို မောင်နှမတွေ တယောက် တလှည့် တက်နင်းပေးရတယ်။ မညောင်းတတ်တဲ့ စန်းထွန်းက ဘယ်နားနင်းရင် ဘယ်လို သက်သာမှန်းမသိ။ ဖေ ညွှန်တဲ့အတိုင်း နင်းပေးလိုက်တာပဲ။ တခါတုန်းက ဒူးခေါင်းဂျွှတ်ကို တက်နင်းလိုက်လို့ဖေ့မှာ နာလို့အော်လိုက်တာ။ ကြိတ်နင်းတယ်ဆိုတာ ရှိသေးတယ်။ ဖေက ညောင်းပဲ ညောင်းနိုင်လွန်းတယ်လို့ပြောတော့ သမီးကြီးလာမှ သိမယ်တဲ့။
ဖေ့သမီး ပီသစွာ မကြီးလည်း ညောင်းတတ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲနီးရင် ဇက်ကြောတက်နေတဲ့ မကြီးကို မေက နှိပ်ပေးရတယ်။ တခါတလေ၊ စိတ်လိုလက်ရမှ နှိပ်ပေးတတ်တဲ့ မောင့်မောင့်မတ်ဆာ့ကတော့ ထိတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ မလေးရှားကို သွားလည်တုန်းက ညောင်းတတ်တဲ့ သူတို့သားအဖနှစ်ယောက် ညနေတိုင်း မတ်ဆာ့ဆီ ပြေးကြလေရဲ့ ။
Batam အင်ဒိုနီးရှားကို သွားလည်ကြတုန်းက ရုံးကလူတွေနဲ့မတ်ဆာ့ဆီ သွားပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ သက်သာသလို ခံစားရပေမဲ့ နောက်နေ့ ကျတော့ တကိုယ်လုံး နာလိုက်တာ ကိုင်ရိုက်ထားသလိုပဲ။ မတ်ဆာ့ဆိုတာ ပိုက်ဆံပေးပြီး ကိုယ်ကို ကိုင်ရိုက်ခိုင်းတာလို့ပြောတဲ့ စန်းထွန်းကို အားလုံးက အထူးအဆန်းသတ္တဝါလို ဝိုင်းကြည့်ကြလေရဲ့ ။ ကောင်းတဲ့ မတ်ဆာ့ကို မရဖူးလို့ နဲ့တူပါရဲ့ ။
ခုတော့ တချိန်လုံးထိုင်၊ ကျောင်းဆင်းရင် အဆောင်ကူး(အဆောင်ကလည်း ကျောင်းကနေ လမ်းကူးလိုက်ရင် ရောက်ပြီ)၊ အခန်းထဲမှာလည်း ဆက်ထိုင်၊ ထိုင်ပြီးရင်း ထိုင်နေတော့တာ(မထိုင်လို့ကင်းမြီးကောက်ထောင်သလို ထောင်နေလို့ မှ မရတာ)။ တချိန်လုံး အခန်းထဲမှာ ဂူအောင်းရတော့ ညောင်းညာပါတယ်။ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှုမှ မရှိတာ ညောင်းမှာပေါ့။
ခုတော့ သမီးသိပြီ ဖေ ညောင်းညာတယ် ဆိုတာကို။ ကိုယ်ချင်းလည်း စာတတ်ပါပြီ။